Ampidiro ny famoahana mitarika ho an'ny fivoarana, ny fampiratiana anatiny, ny fampisehoana efijery anatiny, ny fisehoana mitarika mifanaraka amin'ny fangatahana.
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Led Show , Efijery nitarika, Pikantsarin'ny Led Show, Natsangana ny Led Show, Namboarina ny efijery, Rindrina LED
Home > Products > Miseho ny fampisehoana LED
Miseho ny fampisehoana LED
Ny vokatra avy amin'ny Miseho ny fampisehoana LED , mpanofana manokana avy any Shina, Led Show , Efijery nitarika mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Pikantsarin'ny Led Show R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Fampisehoana ivelany ivelany
P6 Outdoor SMD Advertising Led seho
Rindrina horonantsary LED P8 ivelany
P16 Outdoor ledeho napetraka ho raikitra
Shina Miseho ny fampisehoana LED mpamatsy
Fantsona rindrambaiko LED ary fampirantiana LED
Miezaka izahay hamorona vokatra izay mandanjalanja ny tontolo iainana. Ny rindrina LED any ivelany dia ambany ny fanjifana herinaratra.
Ny fampisehoantsika LED ivelany dia mifanentana amin'ny endrika fampidirana isan-karazany, toy ny mpilalao DVD, cable TV, Internet & intranet sns.
Ireo dia rindrambaiko fampisehoana LED napetraka be dia be, ny efijery fampiratiana LED rehetra dia namboarina amin'ny fantsom-pika, famoahana, habe, endriny sns. Ny fampisehoana LED dia mankafy fiainana lava, izy ireo dia toetr'andro azo antoka ary afaka mandefitra ny vovoka, ny hamandoana na ny orana.
Noho ny haitao DIP izay ampiasaina amin'ny rindrina lahatsary ivelany dia mafy, mateza ary marevaka. Tsy toy ny rindrina lahatsary LED hafa, ny fampisehoana LED ivelany ivelan'ny Priva ivelany dia azo jerena amin'ny tara-masoandro mivantana. Ny kalitao sary dia tsy azo ekena ao amin'ny vahaolana ataontsika, noho izany dia mampiseho mazava ny kristaly na dia eo aza ny andro na ora antoandro.
Ny rindrina fandefasana efijery Priva LED ho an'ny rindranasa ivelany dia vahaolana amin'ny rindrina rindrambaiko LED miorina amin'ny mody. Ny teknolojia ampiasaina amin'ny fampisehoana LED ivelany dia DIP. Satria io no vahaolana miorina amin'ny modely, afaka mamolavola amin'ny endriny na habe rehetra.
Pikantsarin'ny Led Show
Natsangana ny Led Show
Namboarina ny efijery